Xiriirka Taliban iyo Al-Qacida oo wali xooggan ka dib heshiiskii Mareykanka - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xiriirka Taliban iyo Al-Qacida oo wali xooggan ka dib heshiiskii Mareykanka
Xiriirka u dhaxeeya Taliban, gaar ahaan laanteeda Shabakadda Haqqani iyo Al-Qacida ayaa weli ah mid dhow, waxaa sidaa shaaciyey guddi madax-banaan oo QM ka tirsan, inkasta oo uu jiro heshiiskii Mareykanka iyo Taliban, ee Washington ay fileysay inuu soo afjari doono xiriirka.
“Taliban waxay si joogta ah ula tashanayeen Al-Qacida intii uu socday wada-xaajoodka Mareykanka, waxayna siiyeen damaanad qaad ku aadan inay ilaalin doonaan xiriirkooda taariikhiga ah,” ayaa lagu yiri warbixinta guddiga QM oo loo gudbiyey Golaha Ammaanka.
“Guusha heshiiska waxay ku xirnaan doontaa sida Taliban ay uga go’an tahay inay ku dhiiri-geliyaan Al-Qacida inay joojiyaan dhaq-dhaqaayadooda Afghanistan,” ayaa lagu yiri warbixinta kooxda QM ee kormeerka cunaqabateynta Afghanistan.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Taliban ay ixtiraamto heshiiska ay keeni karto in kooxda ay u kala qeybsanto laba garab oo kala ah mid raacsan Al-Qacida iyo mid kasoo horjeeda.
Previous articleSawiro:-Faadumo Cabdi Faandhe oo kulamo wadatashi ah la qadatay bulshada gaalkacyo
Next articleAkhriso:-Wasiirka Warfaafinta oo dhexda ka istaagay fadeexad gaartay Xafiiska RW Kheyre waa Maxay ?
Aqri:-Madaxweyne waare oo la hordhigay xilka qadis ama inuu aqbalo baaqi farmajo
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay Qarax ka dhacay Baydhabo
Akhriso cadaadis xoogan oo la saray Madaxweyne farmajo
Xog Qoor Qoor oo la wareegay Hub & Gaadiid iyo dagaal oo uu diyaar u yahay
Xog culus:-hubka beelaha ee uu aruursanayo Madaxweyne qoor qoor halke loo...
Aqri:-Madaxweyne waare oo la hordhigay xilka qadis ama inuu aqbalo baaqi...
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay Qarax ka...